အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: တိတ်ဆိတ်မှုကို နားထောင်ခြင်း
22 Responses to “တိတ်ဆိတ်မှုကို နားထောင်ခြင်း”
မှတ်သားစရာလေးတွေပဲ ချောရေ။ ကြုံတွေ့ရသမျှ အခက်အခဲတိုင်းကို စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် လွယ်ကူစွာကျော်ဖြတ်နိုင်တာပေါ့နော်။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ကို ကြိုးစားလေ့ကျင့်ရဦးမယ် ထင်ပါရဲ့ အစ်မရေ ...။ တစ်ခုခု ကို သိပ်ပြာယာခတ်လွန်းနေတတ်တယ် ... :)
ခုတလော အသံများကို နားထောင်နေမိသည်နှင့် တိုက်ဆိုင်၏။ :)
That's exactly what i need to do these days. Thanks for sharing :)
ကျနော်လဲ ပြာယာခတ်တက်တဲ့သူမို့ စိတ်ပင်ပန်းရတယ်။ ဆရာတော်ဟောထားတာကိုလည်း နာယူသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။
မချောရဲ့စာကိုမနက်ကတည်းကတွေ့တယ်....ကျန်တဲ့ဟာကိုသွားဖို့လင့်ခ်ကိုနှိပ်တာ မရောက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းကပြတ်နေတယ်....ခုမှ မိစံရှယ်တာတွေ့ပြီး ဇာတ်လမ်းပြန်ဆက်ဖြစ်တယ်ဗျာ....ပုံပြင်ကပေးတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေး အရမ်းကောင်းသလို မချောထပ်ပေးတဲ့ ဥပမာလေးကလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်......မိစံပြောသလို ငါ့အမက စွယ်စုံရဘဲ......တကယ်အစ်မ တော်လိုက်ရ....ဟီးဟီးးးးး စတာနော် မချော.....ကျေးဇူးပါ.......
ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့quoteကလည်း လူဘ၀အတွက် အတုယူပြုကျင့်
တစ်ခုခု အရေးဟယ် အကြောင်းဟယ်ဆို သွေးဆူလွယ်တာကတော့ ခုထိကို မထိန်းနိုင်သေးတဲ့ အားနည်းချက်လို့ပြောရမလား... မှတ်သားသွားပါတယ် မချောရေ....
အရင်တုန်းကဆို ဘာလုပ်လုပ် စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပြာလောင်ခတ်မိတယ်။
အခုတော့ ပြာလောင်ခတ်လဲ မထူး၊ စိတ်အေးအေးထားမှ တစ်ခုချင်း ရှင်းသွားလို့ ရမယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။ အရာတိုင်းမှာ အဖြေ(သို့) ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲချောရေ..။
မမရေ ... တစ်ခုခုဖြစ်ရင် သွေးပူပြီး စိတ်ဓါတ်ကျလွယ် အားငယ်ငိုယိုတတ်တဲ့ ညလေးအတွက်တော့ မမစာလေးတွေကိုဖတ်ပြီး သင်ခန်းစာအများကြီးရတယ်ဗျာ ... သင်ခန်းစာယူ လိုက်နာမှတ်သားပြီး ကျင့်သုံးပါ့မယ် ... :)
ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဘဝနေနည်းကို သင်ခန်းစာ ယူနိုင်တဲ့ ပုံပြင်ကောင်းလေးပါပဲ၊ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့အဆိုအမိန့်ကလည်း တကယ်ကိုပဲ လိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ ကောင်းလှပါတယ်၊ မချောဆီကနေ ဒီလိုမျိုး ခွန်အားရှိတဲ့ စာလေးတွေ ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်...။
တဂျီးမင်းကိုများ ဒဲ့ရေးထားသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ။
စကားပြောရင် မြန်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေတာ။ အခုတော့ အဖြေတစ်ခုတော့ ရသွားပြီ။ ခပ်အေးအေးဘဲ ပြောဖို့ လေ့ကျင့်ရဦးမယ်။
တခုခုဆို ပျာယာခပ်လွန်းလို့ဒီပို့ စ်လေးကနေ အတွေးလေးတွေ ရတယ်..နောင်ကို ဆင်ခြင်ရမယ်..
Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever been runningablog for? you made runningablog glance easy. The entire look of your website is magnificent, as well as the content material!
Remarkable! Its actually amazing article, I have got much clear idea concerning from this paragraph. gmail sign in